IPAE Ekiomenisma FFKM Navoaka ofisialy omaly ny andiany Miombona
Tao anatin’ny fanompoam-pivavahan niraisam-pinoana notanterahina teny amin’ny “Grand Séminaire Ambohipo” omaly alatsinainy 01 jolay 2019 no namoahana ofisialy an’ireo 32
mianadahy nahitana mpitondra fivavahana samihafa sy laika ihany koa, avy amin’ny fiangonana 4 tonta mandrafitra ny FFKM nanaraka voalohany ny fampianarana “Systeme LMD” ao amin’ny IPAE “Ivontoeram-Piofanana Ambony momba ny Ekiomenisma FFKM. 3 taona no naharetan’ity andiany voalohany nivoaka tao amin’ny IPAE ity ka nisalotra ny diplaoman’ny “Licence en etude en oecuménisme”. Ny andraikitra isanisany efa notanan’izy ireo tany amin’ny fiangonana nisy azy avy no ezahan’izy 32 mianadahy hampitana ny resaka Eikomenisma notorantoviny tao anatin’ny fiofanana narahiny. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny lanonana ary nizara ireo diplaoman’ireo mpiofana teny amin’ny Grand Séminaire Ambohipo omaly ireo raiamandreny 3 mirahalahy mitarika ny FFKM (EKAR, EEM ary FJKM izay filoha am-perinasa ankehitriny) niaraka tamin’ny pasitera Ramino Paul, ray mpiahy ny andiany Miombona. Nisy fanapahana mofomamy niarahana nifampizara ny mamy tany amin’ny farany nefa nampitan’ny pasitera Ami Andriamahazosoa ihany koa fa tsy dia ho mamy foana akory no hogohana ao anatin’ity iraka ity fa tsy maintsy hifangaro ao koa ny mangidy isan-tsokajiny. Kihon-dalana hampivoatra ny Ekiomenisma FFKM efa novolavolaina hatramin’ny 40 taona lasa izay, hoy izy, ny fitsanganan’ny IPAE.